को बन्ला त चलचित्र बिकास बोर्डको अध्यक्ष ? - StarPratika.com
को बन्ला त चलचित्र बिकास बोर्डको अध्यक्ष ?
काठमाडौ । सरकारले चलचित्र विकास कार्डको अध्यक्ष पदका लागि आह्वान गरिएको छ । तत्कालिन बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईको ०७६ मंसिर २९ गते असमायिक निधन पछि बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त रहेको थियो । हुदै आएको छ । सरकारले उक्त रिक्त पदमा योग्य व्यक्तिलाई चाँडै नियुक्ती गरिने भन्दै पाँच महिना पछि बोर्डका लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेद्धारीका लागि आह्वान गरेको हो । चलचित्र विकास बोर्डले पाँच महिना देखि यता अध्यक्ष पाएकोे छैन ।
अहिले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बोर्डले अध्यक्ष पाउने संकेत दिएको छ । मंगलवार मन्त्रालयले बोर्ड अध्यक्षका लागि दरखास्त आह्वान गर्दै सो संकेत दिएको हो । मन्त्रालयले १५ दिन भित्र नियमानुसार आवेदन दिन दरखास्त आह्वान गरेको हो । अध्यक्षका लागि स्नातक तहसँगै १० बर्षको फिल्म क्षेत्रमा अनुभव वा प्रविणता प्रमाणपत्र तहसँगै २० बर्ष फिल्म क्षेत्रमा अनुभवको भएको हुनुपर्ने छ । अध्यक्ष पदका लागि अहिले नाम चल्दै आएकामा वर्तमान सदस्य तथा बरिष्ठ निर्देशक दयाराम दाहाल , शम्भुजित बाँस्कोटा, निर विक्रम शाह, लक्ष्मीनाथ शर्मा, हरिहर शर्मा, दिनेश डिसी, राजेश हमाल, दीपकराज गिरी ,भुवन केसी लगायतको नाम चल्दै आएको छ । यसमध्ये को हुन्छ भन्नेमा एकिन छैन ।
रेस्लर अस्मिता र समिरको रोमान्सको ”मान्देउन शिव जी”मा भिडियो सहित ।
गायक शेर बहादुर तामाङ र गायिका सुनिता तामाङका मार्मिक गीत “देश परदेश ” हेर्नुहोस भिडियो सहित
उर्लाबारीमा कृषि सहकारीले ग¥यो सामूहिक धान रोपाई
मिठो लोकभाका ‘तिजैको भाकामा…’ बोलको तीज गीत सार्वजनिक
गायिका देवी धर्ति मगर को तीज गीत “ ट्याक्सी डाईभर” सार्वजनिक (भिडियो सहित )